आइ एन जि ओ को पैसोले देश कहिल्यै सप्रन्न, झन बिग्रन्छ | सिमान्तMarginal आइ एन जि ओ को पैसोले देश कहिल्यै सप्रन्न, झन बिग्रन्छ – सिमान्तMarginal
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित एउटा समाचार बिश्लेषणबाट फेरी पनि पुष्टी भएको छ कि आइ एन जि ओ को पैसोले देश कहिल्यै सप्रन्न, झन बिग्रन्छ। “तराई-मधेसका २२ जिल्लामा एक वर्षमा मात्रै २३ अर्बभन्दा बढी रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजोओ) मार्फत खर्च गरिएको खुल्न आएको छ। ती जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सात सय ४५ वटा परियोजनामार्फत २३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो। उक्त रकम खर्चका लागि ७३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका भित्री मधेससहितका २२ जिल्लामा सक्रिय थिए।” यो अनुभव नेपालले २०१५ को भुकम्पका वेला पनि सिक्ने मौका पाएको थियो, तर सिकेको छैन, सिक्न चाहेको पनि छैन । त्यसो त यो मुलुक बिकाउ मालहरुको बजार भएको छ ! आइ एन जि ओ को पैसोले देश बन्ने भए अफ्रिका अहिले बिश्वको सबैभन्दा बिकसित धनी मुलुकमा पर्ने थियो । कौडिको उपलब्धी नहुने जुकाहरुलाई पालेर सरकार, अर्थमन्त्रालय के गर्छ- भन्ने कुरा खोजनै पर्ने भएकोछ ! धुर्मुस सुन्तलीको सानै प्रयासबाट जत्ती पनि उपलब्धी हासिल गर्न नसक्नेहरुले यो मुलुकको दुर्भाग्यको नक्सा कोर्न चाहि कसरी पाइरहेका छन ! पुरा समाचार बिश्लेषण
Previous Postअध्ययन !Next Postपरिवर्तनलाई अवतरण गर्न चाहिने अर्थ, र नीतिहरुको अभावमा परिणाम के होला ?